INDAWO YOKUHLALA NGOKUSEMTHETHWENI NGOTYALO-MALI lwaseBrazil | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | YOKWENZIWA NOKUBHALA | IGOSA IVISA yaseBrazil, ukuFudukela kwezoQoqosho ngokutyala indawo yokuhlala yaseBrazil ngotyalomali eBrazil, ukuhlala ngokutyala eBrazil, ukuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali eBrazil
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali lwaseBrazil kunye neGolden Visa
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eBrazil:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil
● Ubummi ngotyalomali oluvela eBrazil
● IVisa yegolide eBrazil
● Ipasipoti yesibini evela eBrazil
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eBrazil Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eBrazil kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eBrazil basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eBrazil kubonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eBrazil, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eBrazil, Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eBrazil, Indawo yokuhlala yesibini ngokutyala imali eBrazil, Ubumi kwakhona ngobutyalo-mali eBrazil, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali eBrazil. , Ukuhlala ngokusisigxina ngokutyala imali eBrazil, Ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali eBrazil, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eBrazil, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eBrazil, Ubummi ngotyalo-mali eBrazil, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eBrazil, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eBrazil, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eBrazil, ubumi bobabini ngotyalo-mali eBrazil, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala eBrazil, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali eBrazil, iinkqubo zoBumi boqoqosho eBrazil, Ubumi ngohlobo lotyalo mali eBrazil, Ubumi ngezikim zotyalo-mali eBrazil, okwesibini ipasipoti eBrazil, iipasipoti zesibini eBrazil , Inkqubo yesibini yokundwendwela eBrazil, ipasipoti yesibini yesibini eBrazil, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eBrazil, ipaspoti yesibini yozakuzo eBrazil, ipasipoti yesibini ngokutyala imali eBrazil, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eBrazil, iskim sepasipoti yesibini eBrazil, izikimu zepaspoti yesibini eBrazil , i-visa yegolide eBrazil, ii-visa zegolide eBrazil, iinkqubo ze-visa zegolide eBrazil, inkqubo yegosa yegolide eBrazil, yesibini visa yegolide eBrazil, inkqubo yesibini yegosa yegolide eBrazil, i-visa yegolide ezimbini eBrazil, ubumi kunye ne-visa yegolide eBrazil, ukuhlala kunye ne-visa yegolide eBrazil, ubummi begolide be-visa eBrazil, inkqubo yevisa yegolide eBrazil, izikimu zevisa zegolide eBrazil.
"Izisombululo ezi-1 zokuyeka" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali eBrazil ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo mali olusezantsi eBrazil ngokuhlala kwakhona ngotyalomali: USD 40,000
Intshayelelo iBrazil kunye nokuhlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda nzulu ngeBrazil
Ngabemi abazizigidi ezingama-210, iBrazil lilizwe lesihlanu elinabantu abaninzi emhlabeni (ngoMeyi 2018). Uvavanyo luka-2010 lwafumanisa ukuba i-50.7% yabemi (i-97 yezigidi zabantu) bazibonakalise njengobuhlanga obumnyama okanye obudibeneyo kunye ne-47.7% (91 yezigidi) njengabamhlophe, umxube wobuhlanga obonisa inkcubeko yesizwe.
IBrazil iyakhubeka kwimimandla enezihlandlo ezithathu, enye yazo inguFernando de Noronha kuphela, indawo yeziqithi ezingama-21 kuLwandlekazi lweAtlantic. Isizwe esisisiseko siyinxalenye yengingqi yeMpuma neNtshona yexesha. Inxalenye enkulu yamazwe kwingingqi yeMpuma qaphela iMini yokuGcina amaxesha.
Ukusuka kumahlathi emvula aseAmazon ukuya kunxweme olusempuma oluhle, iindawo zaseBrazil kunye nabantu baye batshintsha-tshintsha njengengingqi yesizwe. Ngomdibaniso obanzi wezazisi kubandakanya indibano yesiJamani, isiTaliyane, isiJapan, isiAfrika kunye nemveli, inkcubeko nganye inefuthe elikhulu kwixesha elide, idibanisa inkcubeko yoluntu eyahlukeneyo.
Ebonakaliswe kukugudla unxweme, amahlathi ahlukeneyo, kunye neendawo ezinkulu ezisezidolophini, iBrazil inikezela ngamathuba amaninzi kubantu abagqiba ukufudukela apho. Ukuhamba kobomi kuyomeleza kwaye kuvavanya, ke uya kufumanisa ukuba ubomi bakho buya kuhlala buhamba-hamba kunye noluhlu. Nangona kunjalo, inye into ngaphandle kwamathandabuzo-ukuhlala eBrazil kukwaphuka komhlaba kwaye uyakushiya umntu onobuqili, ongcono kubo. Sisigwebo esingalunganga esiqhelekileyo sokucinga ukuba iRio likomkhulu laseBrazil kwaye kukugxila kwesizwe. Ewe i-Brasilia iyinkunzi, kwaye iyamangalisa njengeRio de Janeiro, inokubona nje into enkulu ngokubhekisele kwinto ekufuneka isizwe siyizise etafileni. Umantla weBrazil ube nefuthe elikhulu kwimimandla yaseAfrika kwaye ilayishwe ngumtsalane oqhelekileyo; emazantsi abonakaliswa lilifa lawo laseYurophu; kwaye phakathi koku, zonke ziindawo zemithi, imigxobhozo, iipaka zikawonke-wonke, iindawo ezinamandla zasezidolophini, iinkolo ezahlukeneyo, kunye nomculo ongenakulinganiswa.
Abantu abaninzi bacinga ukuba bayayiqonda into efana 'nendawo eqhelekileyo' yaseBrazil. Emva kokuhlala apho, uyakufumanisa ukuba oku sisiphithiphithi kwaye ilizwe lahlukile ngokobuhlanga. Impembelelo yabazali baseYurophu, baseJapan, abemi bomthonyama nabaseAfrika yenze umxube wokwenyani woluntu kunye neempawu ezizezona, kwaye ukubonakala kwabantu kwahluka kakhulu kwiBrazil iphela. Ukuba uyayithanda iwayini ebomvu, uya kujwayela ukuyisela kubushushu begumbi. Nangona kunjalo, kwiindawo ezishushu zaseBrazil, kuyinto eqhelekileyo ukusela iwayini ebomvu osandula ukuyinikwa kwisitya somkhenkce. Ngelixa oku kunokubonakala ngathi kukuphambuka okungagunyaziswanga ngegunya lewayini eliqhelekileyo, nanini na xa udibene nehlobo laseBrazil, uza kukhuleka uvume iwayini ebomvu ebomvu. IBrazil intle; umbutho wayo akunjalo.
Izinto, umzekelo, ii-visa, ukuthengwa kwepropathi, okanye ukuqala ishishini kufuna iimfumba zomsebenzi wezolawulo ezifuna ukufumana indlela yemijikelezo. Elinye ixesha, kuyakufuneka ukhwaze kwaye unikezele, kodwa kungekudala uyaqonda ukuba nokuba uthini na, yile ndlela yenziwa ngayo eBrazil. Kuyadida, kodwa kugcwalisa njengomsebenzi ohloniphekileyo wokuba izinto ezimbalwa azikho kulawulo lwakho kwaye kufuneka uhambe kunye (nokudideka) ukuhamba. Ukugcina ixesha yinto engakhathaliyo eBrazil. Ukuba ubamba indibano eqala nge-8 pm, kuya kubakho abantu abaninzi emva kwelo xesha, kwaye oku kujongwa njengokuqhelekileyo. Ingabakhathaza abantu abakhoyo kwangoko nangamaxesha ukuba uqale nangona uye waqheleka kuyo. Ethubeni uya kuziva ngathi unethuba xa ulahlekelwa ziimfuno zexesha elingenakuguqulwa kwaye ufumanisa ukuba ngamanye amaxesha, ukubonisa ngexesha akufuneki ukuba kube yeyona nto iphambili.
Abantu baseBrazil ngabantu abanomdla kwaye abayikhathazi into yokuxelela umntu ukuba baziva njani. Uninzi luya kuvavanya ngokungafihlisiyo iimeko xa ziziva zigxile, zinomsindo okanye zinqwenela, into yabantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo kunye neziseko ezinokuthi zithambekele ekucinezeleni. Kwimeko apho iBrazil ikuthanda okanye ikuthanda, uyakucinga ngayo. Ngokubanzi baya kuzivumela bazive ukuba baziva njani, endaweni yokuyifihla. Ngokukwanjalo baya kuthi bakhangele okuqinisekileyo nakweyiphi na imeko embi. Kukuzilolonga komhlaba xa ezi mpawu ziqala ukuza kuwe. Emva kokuhlala kubushushu kunye nokufuma, uya kufumanisa ukuba kunjani ukuba neentsuku eziqaqambileyo kunye nemozulu efudumeleyo (ngaphandle kokuba usemazantsi eBrazil, apho kubanda ngokumangalisayo ngexesha elibandayo lonyaka). Kunzima ukubuyela kumoya obandayo kunye noqhwithela emva kokuba ufumanise ukuba kumnandi kangakanani ukuba selangeni elona xesha likhulu lexesha. Iindawo ezinje ngeSão Paulo zisekwe emsebenzini nakumashishini, nangona kunjalo, ukuba uhlala kumanxweme olwandle kwimimandla yasezidolophini ezinje ngeRio de Janeiro okanye iRecife, uya kuthanda indlela yokuphila ehlengahlengisiweyo. Indlela yokujongana nomsebenzi kukwenza kwaye uwenze kakuhle, kodwa xa lithuba elifanelekileyo lokubuyela ekhaya, akukho kunamathela kufutshane. Ngqo elunxwemeni lolwandle, kwiziko le-rec, kwiziko lezolonwabo ukuze usebenze okanye kwibhar yokuxabisa isibini sotywala obandayo kunye namaqabane.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuhlala ngokuTyala imali eBrazil
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil
"IVisa esisigxina" (i-VIPER)
Iqhubekeka nexesha lokuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil
Emva kweminyaka emi-4 yokuhlala ngaphandle kokuphazanyiswa eBrazil nenqanaba le-PR.
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseBrazil
Iinketho zotyalo mali ze Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil
Kutheni usiya kubuhlali ngokutyala imali eBrazil
Ukufudukela eBrazil kunokuba yinkqubo enzima, ngaphandle kokuba uzimisele ukutyala imali elizweni i-40,000 USD. Inkqubo yoTyalo-mali yaseBrazil yindlela elula, ethe ngqo yokufudukela kweli lizwe. Inkqubo ifikeleleke ngokuthelekiswa namanye amazwe.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eBrazil
Utyalomali lokuThengiswa kweNdawo eBrazil kufanelekile ukuba abe neMvume yokuHlala ngokusisigxina yaseBrazil yeBRL 500,000 (usetyenziso. 125k EUR okanye 142k USD).
Zimbini iintlobo eziphambili zotyalo-mali lwenkqubo yoTyalo-mali lwaseBrazil. Eyokuqala kwizindlu nomhlaba. Utyalomali kwizindlu nomhlaba kufuneka lube yi-BRL 500,000 (usetyenziso. 125k EUR okanye 142k USD). Kwezinye iimeko ezithile kunokwenzeka ukuba kutyalwe imali phakathi kwe-BRL 150,000 kunye ne-BRL 500,000 kumacandelo ezinto ezintsha, uphando olusisiseko okanye umsebenzi wophando osetyenzisiweyo. Utyalomali lunokwenziwa kwinqanaba lobuchwepheshe okanye lobunzululwazi. Inkampani inyanzelekile ukuba ibonise ingxelo ebonisa ukuba utyalomali lusekhona emva kweminyaka emi-3. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuyila inkampani kwaye uthathe isigqibo ngohlobo lotyalo-mali. Inkampani kufuneka ikwazi ukusebenza kwaye izise inzuzo. Kukwanyanzelekile ukudala izithuba zengqesho. Emva kokuba umntu efumene indawo yokuhlala waseBrazil, unokuba ngummi emva kweminyaka emi-4. Kukho ithuba lokunciphisa elo xesha.
Imfuno yemali yeBrazil
Inkampani yethu iyakunceda ekufumaneni inombolo yokhuseleko lwentlalo. Emva koko, siya kukubhalisa kunye notyalo-mali kwi-bhanki ephambili yaseBrazil. Siza kuyongamela ngononophelo inkqubo yokuhambisa imali yakho iye kwinkampani enebhanki ephakathi. Emva kokuba imali idlulisiwe, uya kungenisa isicelo. Emva koko uya kunikwa i-visa yomtyali mali waseBrazil. Uya kufumana i-RNE yakho "iKhadi eliMthubi" eliyiNdawo yokuhlala engapheliyo xa undwendwela iBrazil okokuqala.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eBrazil
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseBrazil kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eBrazil ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eBrazil ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eBrazil, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eBrazil kunye namanye amathuba okungena kwelinye ilizwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali evela eBrazil okanye iVisa yaseGolide evela eBrazil okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eBrazil okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eBrazil, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani I-Brazil okanye i-offshore, izibonelelo zabantu eBrazil kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi ngaphakathi naseBrazil nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseBrazil:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeBrazil, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena yeBrazil, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eBrazil, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali eBrazil, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eBrazil kunye nefemi yokubonelela ngokufuduka eBrazil
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eBrazil ukuya kumazwe angama-37.
Visa yegolide eBrazil kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eBrazil ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eBrazil ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eBrazil ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eBrazil.
Iinkqubo zevisa ezimnandi eBrazil ziye kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eBrazil ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eBrazil ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eBrazil ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eBrazil ngeeNdawo zokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu eBrazil ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali eBrazil, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala eBrazil. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eBrazil abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eBrazil, befumana eyona mbuyekezo.
Ezona nkqubo zintle zokuhlala kwezindlu eBrazil ngotyalo mali kwizindlu nomhlaba eBrazil.
Kufuneka uyazi-Indawo yokuhlala yaseBrazil ngoTyalo-mali
Ukuhlala kwakhona liGqwetha loTyalo-mali eBrazil kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu acacisiweyo ukuze ube yimpumelelo yokuba ngumhlali ngokutyala imali eBrazil. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala imali eBrazil kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eBrazil okanye eBrazil, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala imali eBrazil kubaxumi ukuze bafumane imvume yokuhlala eBrazil kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo yeBrazil, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali eBrazil kuya kufuneka sifumane iikopi ezivavanyiweyo zepasipoti yomthengi kunye namalungu osapho.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalomali eBrazil. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBuhlali ngokuTyala imali eBrazil kunye neVisa yegolide izokunceda ngokuzalisa iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwakho abe sele elungile, siya kuwugcwalisa ngabasemagunyeni baseBrazil.
Nje ukuba isicelo sakho sobumi ngokutyala imali eBrazil samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngoBumi ngeenkonzo zotyalo mali eBrazil kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini eBrazil:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eBrazil azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi bezixhobo kunye neembumbulu ukusuka okanye eBrazil.
Kuhlala ngokweenkqubo zotyalo-mali zaseBrazil azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eBrazil okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eBrazil.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eBrazil azinikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eBrazil.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eBrazil ayenzelwanga abantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eBrazil.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eBrazil ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eBrazil.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeBrazil ayifumaneki kubantu baseBrazil abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eBrazil, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eBrazil ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eBrazil ayizizo ezenkolo kunye neminikelo yabo yokunceda eBrazil.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Brazil ayibonelelwa ngabantu abajongana nephonografi eBrazil.
Indawo yethu yokuhlala amagqwetha eBrazil abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eBrazil.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseBrazil kunye neKYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eBrazil malunga nokuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eBrazil.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngoBumi obuBalaseleyo ngenkxaso yotyalo-mali eBrazil kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu eBrazil.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zaseBrazil, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo esihlala kuyo sisebenzisa iinkonzo zotyalo-mali eBrazil sibonelela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo eBrazil.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eBrazil ukuxhasa abathengi kunye neentsapho zabo eBrazil.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBrazil kunye nabameli bezomthetho eBrazil ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokuphatha iBrazil kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eBrazil nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu yeBrazil
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iBrazil, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala imali eBrazil kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzelayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala ngokuTyala imali eBrazil
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi beBrazil, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali yaseBrazil kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eBrazil
Inkqubo yemvume yokusebenza eBrazil
Ukuhlala okwethutyana eBrazil
Indawo yokuhlala eBrazil
Izindlu zoonozakuzaku kunye nabameli baseBrazil
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eBrazil kunye nezinye iiNkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eBrazil ukulungiselela iimfuno ezikhawulezileyo okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela eBrazil nosapho lwakho ngokutyala imali, thina njengeqabane lakho laseBrazil, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eBrazil ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo mali eBrazil, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiBrazil, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esinikezwe ngabaphi na abanye abacebisi baseBrazil abasenza ivenkile yokumisa iBrazil kunye namazwe ayi-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini laseBrazil ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuhlala ngokutyala imali eBrazil ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nababophelelayo eBrazil nakwamanye amazwe.
Inkampani e Brazil
Singakunceda bhalisa inkampani eBrazil okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eBrazil zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki eBrazil
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eBrazil uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eBrazil kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eBrazil, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eBrazil
Ngaba ufuna ukubonisana eBrazil, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eBrazil Njengesango lokuhlawula ngokwesiko okanye ngefintech eBrazil okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali EBrazil ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eBrazil ukuqala kwangoko eBrazil.
Iinkonzo ze-HR eBrazil
yethu inkampani yezabasebenzi eBrazil inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba ezikhoyo eBrazil free.
Iinombolo zeFowuni eziBonakalayo eBrazil
Iinkqubo zeefowuni zeshishini zaseBrazil kunye amanani abonakalayo eBrazil Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eBrazil
Accounting, ngenxa yenkuthalo efanelekileyo eBrazil kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eBrazil
Ukuseta ishishini eBrazil
Emva kokuhlala ngokutyala imali eBrazil, ukuseta ishishini kwi Brazil.
Sinikezela ngezisombululo ezingezantsi ze-IT eBrazil
Uyilo lwewebhu eBrazil
Uphuhliso lwezorhwebo eBrazil
Uphuhliso lwewebhu eBrazil
Uphuhliso lweBlockchain eBrazil
Uphuhliso losetyenziso eBrazil
Uphuhliso lweSoftware eBrazil
Amagqwetha okuHlala kwakhona ngoTyalo mali eBrazil
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni ngokwesisombululo seBrazil kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iBrazil, sizinkokeli, ifemu yethu yezomthetho eBrazil ineearhente zokufudukela eBrazil. Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseBrazil kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali eBrazil kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yoMthengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana iphepha-mvume lokuhlala eBrazil, xa imvume yakho yokuhlala eBrazil ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseBrazil ayimfuneko kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo mali eBrazil. Ukuba useBrazil okanye uceba ukutyelela iBrazil, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eBrazil kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseBrazil. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanelekile ukuba ukhutshiwe okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseBrazil.
Imibuzo ebuzwa qho- Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eBrazil
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eBrazil?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala yaseBrazil ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBrazil ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eBrazil, ukuhlala kwenkqubo yotyalo mali yeBrazil. ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo mali eBrazil, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eBrazil, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali eBrazil kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali eBrazil, abasebenza eyona ndawo ingcono yokuhlala ngabameli botyalo mali eBrazil, kunye neefem eBrazil.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eBrazil | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eBrazil | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBrazil | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBrazil | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eBrazil
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali eBrazil?
Ubummi ngotyalo-mali eBrazil, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseBrazil ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBrazil ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eBrazil, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseBrazil exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali eBrazil, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eBrazil, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eBrazil nangobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali baseBrazil, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eBrazil, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eBrazil.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eBrazil | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eBrazil | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eBrazil | Abatyali mali abangenakufikeleleka eBrazil | Abatyali mali abafikelelekayo eBrazil | Iifemu zomthetho wofuduko olufikelelekayo eBrazil
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini eBrazil?
Ipasipoti yesibini eBrazil, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseBrazil ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBrazil ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Iinkonzo zokundwendwela zesibini eBrazil, ngamagqwetha esibini eepasipoti eBrazil, amagqwetha esibini eepasipoti eBrazil kunye nabangabacebisi besibini abaphucukileyo eBrazil, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini eBrazil, kunye neefem zokubonisana zokufudukela eBrazil.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini eBrazil | Iiarhente zokundwendwela zesibini eBrazil | Amagqwetha esibini epasipoti eBrazil | Igqwetha lesibini lokundwendwela eBrazil | Abacebisi bokundwendwela besibini eBrazil
Iyintoni inkcazo yevisa yegolide eBrazil?
I-visa yegolide eBrazil, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala yaseBrazil ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBrazil ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, njl. Iinkonzo zevisa zegolide eBrazil, ngamagqwetha ethu egolide eBrazil, amagqwetha egosa eBrazil, kunye nabacebisi begosa baseBrazil, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eBrazil, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eBrazil.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeBrazil | Iiarhente zevisa ezimnandi eBrazil | Amagqwetha egosa egolide eBrazil | Amagqwetha egosa egolide eBrazil | Abacebisi begosa begolide baseBrazil
Leliphi elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eBrazil?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eBrazil yi-USD 40,000.
Ngaba uyayibonelela ngenkxaso yezomthetho eBrazil ngokuHlala kwakhona ngokutyala imali?
Ewe, igqwetha lethu eBrazil kunye neearhente eBrazil zibonelela ngenkxaso yobumi ngokutyala imali eBrazil.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eBrazil kubiza?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali eBrazil kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali eBrazil yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo woboniswano ngokuHlala kuTyalo-mali eBrazil, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo-mali.
Ngabaphi abahlali belizwe abanokufaka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eBrazil okanye nge-visa yabatyali mali ukuya eBrazil?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala imali eBrazil ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBrazil ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil ukusuka eYurophu, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil usuka eBangladesh, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil usuka eIndonesia, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali eBrazil usuka eSri Lanka, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBrazil usuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali eBrazil usuka eIndiya naseBuhlali ngokutyala imali eBrazil isuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eBrazil
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngokuTyala imali eBrazil
Amagama abalulekileyo ekuhlaleni ngokuTyala imali eBrazil
Umbutho waseBrazil iinkampani zothutho UMhlaba wabahambi
Umanyano lweZizwe eziManyeneyo
Umbutho weCement yaseBrazil, ePortland
Umbutho weeNkampani zaseBrazil zeTekhnoloji yoLwazi
Umbutho waseBrazil wePulp kunye nePhepha
I-ABRAVIDRO-Umbutho waseBrazil waBasasazi kunye nabaPhathi beGlasi yeeNdawo
Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle: www.kre.ov.br
Umbutho waseBrazil wamashishini okutya
Umbutho waseBrazil woShishino boMatshini nezixhobo
Iiaroma kunye neManyano
Icandelo loMphathiswa Wezophuhliso, Imveliso: www.kunika.ov.br
Umbutho waseBrazil wabaQeqeshi kunye nabathumela ngaphandle kwihagu
Indlu yeRhwebo: I-Indiya http://www.indiabrazilchamber.org/en/
Umbutho waseBrazil weeNkampani zeThutho zaManye amazwe
Umbutho wezeMfundo kwiCandelo loShishino
Umbutho waseBrazil weDistribuidoes weeKhemikhali kunye neePetechemicals
Umbutho weBrazil Chemical Industry Association
Umbutho weSizwe wokuKhuthaza abaChumisi
Umbutho waseBrazil weziseko zophuhliso kunye naMashishini asisiseko
Umbutho waseBrazil wamaZiko okuThengisa
Umbutho weSizwe weShishini lePetroleum
Umbutho wabaFundi beBrazil waseBrazil
Umbutho waseBrazil waBenzi beZicangu
Umbutho waseBrazil weFine Chemical Industry, iBiotechnology kunye neeNgcali zayo
Umbutho waseBrazil wamashishini Pasta
Umbutho waseBrazil waBaqulunqi bepeyinti
Umbutho weAluminiyam yaseBrazil
Umbutho weSizwe we-Ceramic Tile Abavelisi bokupheka
Umbutho wokuPakisha waseBrazil
Umbutho waseBrazil woBunjineli beMichiza
Umbutho woShishino lwePlastiki yaseBrazil
Umbutho weSizwe waBenzi beZithuthi
I-Brazil Union of Fair Promoters
Umanyano lweZimbiwa zePlastiki zeShishini
Umbutho waseBrazil weManyano yefanitshala
Umbutho waseBrazil wamashishini kunye nabathengisi beZilwanyana kumazwe angaphandle
Umbutho weSizwe weShishini lweCeramic
Umbutho wezeMpahla waseBrazil
Umbutho wezoBugcisa waseBrazil waseBrazil wezoShishino ngeAglasi
Umbutho weBrazil Wheat Association Association
Umbutho waseBrazil weCeramics
Umbutho waseBrazil waBacebisi boBunjineli
Umbutho waseBrazil wokuhlaziya, ukuhambisa umoya kunye nokupholisa
Umbutho weMizi-mveliso yokuCoca, Ukufudumeza kunye noMoya woNyango lweRio de Janeiro
Umbutho wamashishini amdaka aManzi waseBrazil
I-National Union of Wire Drawing kunye neeRollling Ferrous Metals
Umbutho waseBrazil wamaShishini eoyile efunekayo, iiKhemikhali ezinamakha, iziqholo,
Umbutho waseBrazil weeNkampani zeThutho zaMazwe ngaMazwe eCargo Express
Iqela laseBrazil lezokwakha
Umbutho waseBrazil wabaLimi beeCitrus
Umbutho waseBrazil wabasasazi boMbane
Iziko laseBrazil leJografi kunye: http://www.ibge.gov.br/home/
Umbutho waseBrazil woMbane kunye nee-Elektroniki ishishini
Imanyano yamashishini oLwakhiwo kwiRio de Janeiro
Ukudityaniswa kweePaints kunye neeVarnish zaseSão Paulo
Icandelo loMphathiswa Wezolimo kunye: www.mapa.gov.br
Umbutho waseBrazil weeNkampani zeeNkonzo eziBonakalayo
IPortal Brasil: www.inzinek.it
I-Central Bank ye-Brasil (BCB): http://www.bcb.gov.br/pt- br/paginas/default.aspx
Imanyano yezithuthi zoMdibaniso weSizwe
Umbutho waseBrazil woShishino lwePipe kunye nezixhobo zensimbi
IPortal yeShishini laseBrazil: http://www.portaldaindustria.com.br/cni
Umbutho waseBrazil weMetallurgy, Izixhobo kunye neMigodi
Umbutho wezoBugcisa waseBrazil wePulp kunye nePhepha
Imanyano yamashishini e-São Paulo State
Ulawulo lweenkampani zaseBrazil: www.ludityidportport.gov.br
Umbutho waseBrazil wabathwali bamanye amazwe
Umbutho waseBrazil wePolymers
Umanyano weRubber Artifact Industry kwiLizwe laseSão Paulo
Umbutho waseBrazil woShishino lweKofu
Umbutho weShishini laseBrazil
Umanyano lweenkukhu zaseBrazil
Umbutho waseBrazil waBenzi beArtificial and Synthetic Fiber
Umbutho waseBrazil weRubber Artifacts Industry
Amazwe Angaphandle eBrazilhttp://www.comexbrasil.gov.br/
Umbutho wezoMveliso wokuPrinta waseBrazil
Umbutho waseBrazil weMpahla yeLtile kunye neMpahla yeVenkile
Umbutho waseBrazil wamashishini aMafutha eoyile
Hlanganisa kwi ISebe loFuduko lwaseBrazil , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eBrazil